Amazwe avelisa amandla omoya ngakumbi namhlanje | Ukuhlaziywa okuluhlaza
UManuel Ramirez | | Amandla omoya, Umoya ovuselelekayo
La Amandla omoya ngomnye wemithombo ephambili yotshintsho ngoku kwezinye iihorizoni ezingenanto yakwenza nokusetyenziswa kwezibaso. Kuya kufuneka uyazi ukuba ubuncinci amazwe angama-84 kwihlabathi liphela asebenzisa amandla omoya ukubonelela ngeegridi zombane.
Kunyaka nje omnye odlulileyo amandla omoya kugqithwe kuma-369,553 gW kunye nemveliso yamandla iyonke ikhula ngokukhawuleza ibe ziipesenti ezi-4 zombane xa usetyenziswa kwiplanethi. Kwaye ukuba i-17 gW efakwe ngo-2014 ibisele iyimpumelelo, kwisiqingatha sokuqala sika-2015 bafikelele kuma-21,7 gW, okusizisa kumgangatho wehlabathi wama-392 gW, malunga nama-428 gW ekupheleni kwalo nyaka. 2015.
Amandla ehlabathi akhule kwiinyanga zokuqala zika-2015 ngeepesenti ezi-5,8 Emva kokufumana i-5,3% ngo-2015 kunye ne-4,9% ngo-2013 kwangexesha elifanayo.Ukuba sicinga ukuba ngo-2014 izinga lokukhula ngonyaka laliyi-16,5 yeepesenti ukuze phakathi konyaka-2015 kubekho iipesenti eziyi-16,8, sinokwazi unyaka omkhulu sinamathele kwi2015.
Oku kunyuka kokusetyenziswa kwamandla omoya kufanelekile ikakhulu kwizibonelelo zoqoqosho Ukusuka kulo mthombo, ukwanda kokhuphiswano, ukungaqiniseki kunikezelo lweoyile kunye negesi kunye noxinzelelo lokuya kubuchwepheshe obucocekileyo nobuzinzileyo ekuhambeni kwexesha.
1 Abavelisi abaphambili bamandla omoya
3 Amanye amazwe aya kubaluleka
4 Amandla omoya aphambili kwikamva lamandla
5 Uphando kunye nophuhliso lweetekhnoloji ezintsha
6 U-2016 unyaka obaluleke kakhulu kumandla omoya
Abavelisi abaphambili bamandla omoya
Icandelo lomoya li ngoku iqhutywa ludidi olulungileyo lwamashishini amandla amakhulu, ookopolotyeni bamandla kumaqela ezendalo. Kuyaziwa ukuba kwimpumelelo enkulu yolu hlobo lomthombo wamandla kuya kufuneka iintlobo ezahlukeneyo.
Ekupheleni kukaJuni 2015, ilizwe eline Amandla amakhulu omoya afakiweyo yiChina kwindawo yokuqala, kulandele i-United States kwindawo yesibini kunye neJamani kwindawo yesithathu.
I-China ine-124 gW kulo nyaka kwaye Ikhule nge-10 gW ukusukela ngo-2014 kwaye kwi-44 gW ukusukela ngo-2013. Ukukhula okuqhubekayo okuncedayo, ngokuyinxenye, ukunciphisa iingxaki zongcoliseko, nangona kuyakufuneka kutyalwe imali eninzi kolu hlobo lomthombo ukuze ukwazi ukunciphisa ngokwenene.
Okulandelayo I-United States ine-67 gW efakiweyo Kwaye ekukhuleni kwayo ukusukela ngo-2013, kwiminyaka nje emibini, amandla ayo anyuke nge-8 gW ngokuma okungokoqobo, into enokubonakala eJamani, eIndiya naseSpain, ewe, xa kuthelekiswa nokukhula okukhulu e-China.
Ngaphandle kwamagunya aphambili kumandla omoya, kufuneka Chaza iBrazil ebonise elona nani liphezulu ukukhula kwazo zonke iimarike nge-14% yokukhula kulo nyaka 2015
Njengengongoma embi sifumana iimarike ezininzi zaseYurophu ezikhubazekile, into eza kwenzeka kumaJamani xa utshintsho oluthile kummiselo lungena kule minyaka mibini izayo, into eza kunciphisa amandla omoya.
iTshayina ilindele ukuba ibe ne-347,2 gW ngowama-2025 ufakelo lonyaka oluya kufikelela kuma-56,8 gW. Into ebaluleke kakhulu kolu hlobo lwamandla luya kuthetha ntoni kweli lizwe.
Kwaye nangona i-China ngoku ikwangowona mgangatho uphezulu wolu hlobo lwamandla, ikwangomzuzu wokuma. Amanani akhoyo I-2025 kwihlabathi liphela iya kudlula kwi-962,6 gW Oko kuthetha ukuba i-China izakuba, nangolu thintelo, ngomnye wabadlali abaphambili boluhlobo lwamandla kumhlaba.
Kungoku nje kulo nyaka kuye kwaxelwa kwangaphambili ukuba i-China ayinakubekwa nje kuluhlu njengolu eyona ifaki yamandla omoya enkulu ngowama-2015, kodwa iza kuqhubeka ukukhokela eli candelo ngowama-2016.
Amanye amazwe aya kubaluleka
I-India, i-Australia, i-Japan, i-South Korea, i-Philippines, i-Thailand kunye ne-Taiwan bandise umthamo wabo ukusuka kwi-148,2 gW ngo-2014 ukuya kuma-437,8 gW ngepesenti yesabelo sehlabathi eya kuthi ifike kuma-45,5%.
Amanye amazwe aphambili Impumelelo yamandla omoya yiArgentina, iBrazil, iChile, iColombia neMexico ezakongeza i-45,6 gW. Sele sithethile nge-Uruguay neCosta Rica njengemizekelo emibini emikhulu yemigaqo-nkqubo evumela ukukhula kolu hlobo lwamandla acocekileyo, into ebalulekileyo kwikamva lethu.
Amandla omoya aphambili kwikamva lamandla
Olu hlobo lwamandla lube iindleko kakhulu ngempumelelo. Kwiindawo apho ukusetyenziswa kwamandla kuyanda, kufuneka kwenziwe imithombo emitsha, kwaye kulapho amandla omoya kufuneka adlale indima ebaluleke kakhulu.
Kwiimarike ezivuthiweyo apho iziseko zophuhliso lwamalahle, zenyukliya okanye zerhasi sele zikhona, kukho imiceli mngeni engaphaya ngenxa yenguqu enkulu ekufuneka yenzekile. Kulapha Apho amandla omoya kufuneka akhuphisane neendleko zolondolozo kwimithombo yamandla esele ikho. Okwangoku, umthombo wamandla omoya lukhetho olunomtsalane, ngaphandle kwento yokuba ibonelela ngamandla ngaphandle kokukhupha iigesi zegreenhouse.
Inayo into eya kuyo kwaye zinciphisa iindleko. Kukho izizathu ezithathu eziphambili. Enye kukuba oomatshini bomoya bayaluphala, kunye neenqaba ezinde kunye nolwakhiwo olulula. Okwesibini kukuba ukusebenza ngokukuko kweenkonzo kubonelelwe kwaye iinkqubo zokuvelisa zinciphisa iindleko. Okwesithathu, kwaye okokugqibela, kukuba njengoko ufakelo lomoya lukhula, iindleko zigcinwa ngokwenziwa kwinqanaba elikhulu kunangaphambili.
Esinye sezizathu zayo eziphambili kukuba ukulwa nokutshintsha kwemozulu kunye nefuthe lamandla acocekileyo kunye nexabiso eliphantsi anokuthi azinze ngokuhamba kwexesha. Ukubonelela ngala mandla ayimfuneko ukuze umhlaba esiphila kuwo usebenze kwaye kwangaxeshanye ungabangeli ukukhutshwa kwe-CO2 emoyeni yinjongo yeenkampani eziphambili ezinje ngeVestas.
Ukubaluleka okukhulu kwamandla omoya
Uphando kunye nophuhliso lweetekhnoloji ezintsha
Kuyinto kakhulu utyalo-mali olubalulekileyo kubuchwepheshe obutsha Ukusebenza kwamandla kwezi turbine kunye nezinto ezahlukeneyo ezintsha zikhokelela kwezinye iindlela apho banokwenza khona ipesenti ephezulu kusetyenziso lwamandla avela kumandla omoya.
Sibonile abantu abadumileyo ngokomgangatho weBill Gates batyale imali eninzi kubuchwephesha bamandla obutsha obufana ne-2.000 yezigidi zeedola esebenzileyo
Kuvela kwiingxilimbela zobuchwephesha ezifaka intuiting ukuba kufuneka sitshintshe kwindlela yokubona ipanorama yamandla esizifumana sikuyo. Ukuba siphawule ngeGates, enye yezinto ezinkulu njengoMark Zuckerberg nabo bayayenza into yabo Isanti ukukhuthaza amanye amashishini abucala ukuba afune ikamva elicocekileyo kubo bonke kunye neplanethi ezinzileyo.
UGoogle unenye iprojekthi enkulu e-Afrika apho izakufaka ngaphezulu kwe-365 iiinjini zomoya kunxweme lweLake Turkana eKenya. Iya kuthi ibonelele ngepesenti ye-15 yombane osetyenzisiweyo kweli lizwe.
El ukugcinwa kwamandla Kukwaboniswa ukuba lubalulekile kuzo zonke ezi nguqulelo zifunekayo ukuba zenzeke ukusukela oko kugcinwa amandla ashiyekileyo amakhulu eetanki zomoya anokubonelela kubalulekile ukugxininisa ukusetyenziswa komthombo wamandla njengamandla omoya.
I-Tesla kunye neebhetri zayo zasekhaya zibonisa enye indlela, kodwa kunokuba yintoni ukuzithemba amandla wabasebenzisi, kodwa kwisikali esikhulu inokubonelela ngeebhetri eziyimfuneko "ukugcina" le ntsalela.
Sikwanetekhnoloji entsha enje oomatshini bomoya ngaphandle kweebhleyidi ezenziwe yiVortex, inkampani yaseSpain ngoku evakalayo kakhulu ngenxa yokubandakanywa kweeinjini zomoya ezingenakubangela ifuthe kwindalo esingqongileyo, kuba ngaphandle kokuphelisa ingxolo yezendabuko, azitshintshi okusingqongileyo njengoko zisenza.
Le teknoloji yeVortex isebenza ngendlela yokuba isebenzisa i-deformation evelisiweyo yintshukumo ebangelwa ngumoya xa ungena kwisandi kwisilinda esime nkqo esiqinileyo kwaye similiselwe emhlabeni. Yiyo le deformation inoxanduva lokuvelisa umbane.
U-2016 unyaka obaluleke kakhulu kumandla omoya
KwiNgqungquthela yeMozulu yaseParis uthotho lwezivumelwano kufikelelwe kulo obeka u-2016 njengonyaka obalulekileyo ukuze ezi pesenti zamandla omoya kufuneka zikhuphuke kakhulu ngenxa yezizathu esizaziyo sonke.
Ikoteyishini yemozulu apho amandla omoya abekwe khona njengomnye wemithombo yamandla ebalulekileyo yokunciphisa i-greenhouse gases kwi-atmosfere ebangela iingxaki kunye neentlekele zendalo kwihlabathi liphela. Utshintsho ekufuneka lwenziwe kuzo zonke iindawo zeli lizwe ukuze lube nesiphumo esihle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » Amandla omoya » Amazwe ngoku avelisa awona mandla omoya
Umbono wokudala iifama zomoya ngakumbi ukuphucula imeko yendalo encinci ubalasele
i-lucy soda sitsho
Kuhle ukuba yandinceda esikolweni ...: p
Phendula lucy sosa
amandla angwevu sitsho
Kwaye ukunyuka okulungileyo
i-dariana ramones sitsho
Oku kwandinceda esikolweni sam kwaye ndafumana u-A
Phendula u-dariana ramones
UFlorence uthutsha sitsho
Isisebenzele isikolo sam kwaye ndithatha enye efana nedariana ramones
Phendula iiflorencia torres
Ndicinga ukuba kulungile ukuba bayithathele ingqalelo imeko-bume.
Amandla omoya yingcamango entle!
UJose Castillo sitsho
Sinobuchwephesha obutsha bokugcina amandla avela kwizityalo zamandla elanga nawomoya ngamaxesha aveliswayo kwaye, ukuze sikwazi ukuwasebenzisa ngamaxesha okusetyenziswa kakhulu okungasoloko kulixesha lesizukulwana
Ukuba unomdla, qhagamshelana nathi info@zcacas.com
Phendula ujose castillo
U-nelson sabino jaque busts sitsho
Kudala ndiphanda lo mbandela kwiminyaka engama-30 eyadlulayo, ndinelungelo elilodwa lomenzi wechiza ngeeprojekthi ezininzi kodwa ezimbini zibalasele, enye inamandla omoya oyiparadesi kwaye enye inamaza olwandle. Ukuza kuthi ga ngoku andifumani ndlela yokuzithengisa. Ndikufumanisa kungxamisekile ukuba ndiphume kwinkqubo yeenqaba ezinkulu, ezinee-axis ezithe tyaba, ukuze enye isebenze ngakumbi kwaye ngenxa yamaza, ukuphakamisa isisombululo kwiinjongo zeshishini, ebezingekenzeki ukuza kuthi ga ngoku. Ndivulelekile kubafowunelwa ukuqhubela phambili kule ndlela ibalulekileyo.
Phendula u-nelson sabino jaque bustos
Ihlabathi liphela linee-gigawatt ezingama-300 zamandla elanga